WOWOW Laba Qalabka jikada Qulqulka Wejiga leh ee Birta Birta Birta Ah
Bogga ugu weyn / Qubeyska jikada / Jiid qasabadaha Jikada / WOWOW Laba Qaboojiye Jikada Qasabadaha leh Qalabka Buufinta ahama
Qulqulka biyaha waxaa ku jira buufiyaha dhinaca. Adoo fududeynaya shaqooyinka nadaafadda maalinlaha ah, waxaad geli kartaa dammaanad, adiga oo og in tubooyinka jikada ay kaabeen damaanad qaade nolosheena xadidan.
Qashin-qaadaha dhinaca ka iibiya 23118A4
Tubooyinka jikada ee dhinacyada iibiya waxay ku yimaadaan qaabab, qaabab iyo cabbiro badan. Qashin-qaate u gaarka ah jikada ee WOWOW wuxuu la imanayaa qalab wax lagu buufiyo oo aad u isticmaali karto diyaarinta dherigaaga, dheriga iyo saxamada. Waxyeeleeyaha dhinaca ayaa sida xaqiiqada ah ka dhigi kara dhammaystirka shaqooyinka maalinlaha ah hawl fudud oo xiiso leh. Buufin dhinaca WOWOW waxaa la dhigayaa dhinaca ku haysa tubbada qolka jikada lafteeda, waxayna diyaar u tahay in isla markiiba oo si fudud loo jiido. Qulqulka biyaha ee dheer oo leh 60 inji, waxay ku fidin doontaa goobta aad ku dhaqeyso si weyn. Gaar ahaan marka jikadaada ay ku qalabeysan tahay weel labajibbaaran, mid wax qasaarahan wuxuu ku imaan karaa si aad u wanaagsan. Dhibco kasta, shay ama gees walba gudaha iyo hareeraha saxanka jikadaada waxaa lagu gaari karaa dhinaca buufiyaha dhinaca WOWOW 'tubbada tubada tubada ee jikada.
Bixiyeha dhinaca wuxuu kuu oggolaanayaa inaad si toos ah biyaha ugu buufiso adigoo gujinaya badhanka badhanka gadaal-gadaasha ee kujooga laftiisa. Ka-hor-maydhista ka sokow waxaad u adeegsan kartaa dhinaca miiraha sidoo kale dhaqista gacmaha, ama howlaha kale ee jikada. Tuubada biyaha ee buufinta dhinaca waxay kuxiran tuubada iyo biyaheeda tuubbo qaas ah. Xuub-xiraha korantadaani wuxuu xukumaa meesha biyaha loo jiheeyo marka midbaheysanaha la isticmaalo. Sidan ayaad u dareemi kartaa biyo-adag oo biyo-adag si aad runtii ugu maydho taarikadaada, adoo aan xoog uga qaadaynin awooddeeda.
Naqshadeynta tubada kushaqeeyaha weelka dhinac u iibiya
Qashin-qubka jikada ee WOWOW waxaa loogu talagalay daryeel iyo dadaal badan. Naqshadeeyayaasha WOWOW waxay rabeen inay isku daraan astaamo kala duwan si ay ugu yimaadaan qaab qurux badan, casri ah, iyo wixii ka sareeya naqshadeynta tubada jikada oo dhan. Naqshad heer sare ah ayaa la doortay, sida loogu yeero 'goseneck' isla markaaba waxay siisaa xarrago qurxoon tubbada jikada. Dhanka kale, labada gacan ayaa si geesinimo leh loogu talagalay in ay taabasho gaar ah u yeeshaan tuubada dareeraha WOWOW. Ugu horreyntii, laba gacan ayaa loo xushay inay saameyn xoog leh ku yeelato tuubada kushiinka kusameysa. Marka labaad, gacmuhu waxay heleen nashqadeyn qaas ah oo ka sameysa qashin-qubka armaajada jikadaas shaki la'aan isha ku haysa jikada kasta.
Qaboojiyaha khafiifka ah ee jikada 'WOWOW' ee kushiinka jikada ee WOWOW waa mid si aad ah u milicsanaya. Sidan ayaa muraayad u eg muraayad u eg, taas oo lagu dari karo ku dhawaad ​​nooc kasta oo qurxinta. Qashin-qaaduhu waxa uu u egyahay warshadihiisa, iyada oo ay faa'iido u leedahay dhinaca in ay muddo dheer sii waarto. Dhamaadka waxyaabaha aan la jaanqaadi karin waxay runtii dhammaystiri karaan muuqaalka mashiinka jikadaaga. Qaabkaaga cusub (jikada) cusub ayaa dhab ahaan ka heli doona tubada jikada ee mucjisada ah.
Qubayska korantada ee dabaqa koobaad
WOWOW caalami ahaan waxaa lagu yaqaanaa inay ku bixiso tubooyinka qolka jikada fasalka koowaad qiimo jaban. Xaqiiqdii waad cadeyn kartaa in WOWOW ay bixiso qiimaha ugu wanaagsan ee lacagta. Inta badan A-wershaduhu waxay ku dallacaan saddex-jibbaar ama xitaa afar jibbaar qiimaha waxa WOWOW ku soo dalaco tuubooyinka jikada, tayada ayaa runti aan ka yarayn qaar ka mid ah A-garaamyadaas. Waxaan si daacadnimo leh u oran karnaa tayadayada ayaa xitaa ka sii fiicnaata dhowr noocyada A-summada. Waxaan taas ku caddaynnaa marar badan.
Maaddaama aan aaminsanahay qiimahayaga lacagta, waxaan ku siinaynaa 5 sano oo dammaanad-qaadis ah. Haddii tubbada qolkaaga wax ku kariyo ay hal dhibic ku burburaan, WOWOW si farxad leh ayey ugu beddelaysaa mid cusub. Iyadoo aan dhibaato jirin. Maaddaama alaab-qeybiyeyaasha badankood, xitaa qaar ka mid ah A-buundooyinka, ay ku siinayaan kaliya hal sano oo dammaanad qaad ah, WOWOW waxaan u maleyneynaa inaan ka gudubno heerka warshadahaas. Haddii tubada qolkaaga wax ku kariyo ay waxyeello gaarto 1 ama 2 sano ka dib, uma maleynno inay cadaalad tahay inaad u baahan tahay inaad sidatan u qaaddo halista tan. Qashin-qaaduhu waa inuu ku dhammaadaa ugu yaraan 3 sano, oo WOWOW annaga ayaa mas'uuliyaddaas iska leh.
Qalabka birta kafeega ah ee birta korantada leh
Dhinacyadan tuubbada lagu buufiyo jikada waxaa laga sameeyay qalab heerkiisu sarreeyo. Isla markiiba taas waad ogaanaysaa markii aad gacmaha ku haysatid qasabadda jikada lagu buufiyo. Miisaanka waa mid cajiib leh ku dhowaad 50 oz, oo wuxuu muujinayaa tayada qalabka la isticmaalay. Maaddaama qasabadaha jikada ee ugu raqiisan ay culeys yareyn doonaan, maxaa yeelay isticmaalka ugu yar ee qalabka, ama xitaa la'aanta qalabka birta, WOWOW waxay ku faantaa qalabka heerka sare ee la isticmaalo. Xidhiidhiyayaasha naxaasta ah, qaybta birta ka samaysan iyo birta wax-qabadka leh iyo wax-qabadka. Waxaad dareemi doontaa tayada markii aad aragto, iyo qasabada dhinaca lagu buufiyo ee WOWOW taas oo aan ka duwanaan doonin.
Culeyskiisa ka sokow, adeegsiga shaqooyinka kala duwan ee tuubada jikada lagu buufiyo sidoo kale waxay muujineysaa tayada qalabkan qalabka jikada. Sida gacamuhu si habsami leh ugu socdaan iyada oo aan wax khilaaf ah ama gadaal ah tusaale ahaan. Hufnaanta loo isticmaalo tuubbada biyaha ee dhinaca buufinta dhinaca kale, iyo sida ay dib ugu noqoto meeshiisii ​​hore. Sidoo kale sida ay u fududahay in lagu shaqeeyo buufintaan dhinac-udirirka ah badhanka birta birta ah. Dhammaantood waxay ku darayaan tayada nadiifka ah ee aan la tartamin.
Tubbada jikada oo si fudud loo xirxiran
Tuubada jikada ku buufisa dhinacyada waa mid aad u fudud in la rakibo. Maaddaama ay la timid xirmo rakibid dhammaystiran, waxaad ku rakibi kartaa dhinacan tuubbada jikada buufinta nus saac gudahood. Xitaa uma baahnid inaad hesho tuubbo qaali ah. Tilmaamaha cad ayaa suurtogal ka dhigaya in la rakibo dhinacan tuubada jikada lagu buufiyo, adigoon isticmaalin qalab qalafsan. Dhammaan qalabka lagu rakibo qaybtan wanaagsan ee farshaxanka ah jikadaada ayaa lagu soo daray.
Maaddaama WOWOW ay leedahay tiro sii kordheysa oo macaamiil caalami ah, oo ku soo laabanaya WOWOW markay u baahdaan qasabad kale, waxaan sidoo kale ku siinaynaa dammaanad 90 maalmood oo lacag celin ah. Muddo 5 sano ah oo aan qatar lahayn oo muddo damaanad ah ka sokow, waxaad sidoo kale dib uheli doontaa lacagtaada haddii ay dhacdo inaadan layaabi doonin qiimaha lacagta aad kuhesho qasabaddaan jikada lagu buufiyo. Waxaad heli doontaa lacag celin buuxda adigoon wax su'aalo ah lagaa waydiinin. Khibraddeennu waxay noo sheegaysaa inaysan muhiim noqon doonin, laakiin waxaan kuu haysan doonnaa macmiil kale oo nolosha ah WOWOW!
Faa'iidooyinka tuubada kushiinka kushaacan ee dhinaceeda:
• Waxay siinaysaa walxo-fuul jikada kasta
• Xoog xoog leh oo biyo-u-maydhista dhinacyada
• Qaab quruxsan iyo geesinimo leh
• Gacmaha si tartiib ah u shaqeynaya
• 5 sano oo damaanad qaad ah
SKU: 23118A4 Categories: Qubeyska jikada, Jiid qasabadaha Jikada Tags: Nickel caday, Kala saar gacanta, Qalalaasaha dhinaca
WOWOW jikada Qubayska Qalabka Qashinka
La iibiyey: 21
Qulqulka Dheecaanka Dheecaanka ee WOWOW Dusha Dusha Sare ee Jaranjarada N ...
La iibiyey: 71
WOWOW Dheriga Fiilooyinka Ganacsi Feelaha Khorka Chorme
WOWOW Dheriga Fiilooyinka Ganacsi Faylasha Saliida Nadiifisay Naxaas
La iibiyey: 72